घट्याे यस्ताे घट्ना, तीन सवारी एक आपसमा ठोक्किँदा तीन मृत्यु,केछ घाइतेकाे अवस्था ? — Imandarmedia.com
घट्याे यस्ताे घट्ना, तीन सवारी एक आपसमा ठोक्किँदा तीन मृत्यु,केछ घाइतेकाे अवस्था ?
काठमाडौँ । तीन वटा सवारी एकआपसमा ठोक्किँदा सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार आइतबार बिहान कोशी गाउँपालिका – ८ नङ्खु टोलस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा हायसले पिकअप र मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा तीन जनाको मृत्यु भएको हो ।
मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर ५ का २८ वर्षीय उदय साह, मोटरसाइकल पछाडि सवार मोरङ विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ९ का ४५ वर्षीय रामप्रसाद साह र पिकअप चालक विराटनगर वडा ७ का ४० वर्षीय अक्षय कुमार गुप्ता छन् ।
हायस चालक नुवाकोट विदुर नगरपालिका वडा नम्बर १३ का ३५ वर्षीय विवश तामाङ र हायसका सहचालक २५ वर्षीय नारायण बत्स्याल भने घाइते छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार दुर्घटनामा परी दुई जना घाइते भएका छन् । पूर्वबाट पश्चिम जाँदै गरेको बा ३ ख ७२२४ नम्बरको हायसले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको स६प ४६६१ नम्बरको मोटरसाइकल र को१च ९३६८ नम्बरको पिकअप गाडीलाई ठक्कर दिएको थियो ।
त्यस्तै गौरादहमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ । गौरादह ४ मैदानघोपाका गोपाल भट्टराईका छोरा २ वर्षीय संयोगको डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
शनिबार साँझ घर अघिको पैनीमा डुब्दा सिकिस्त भएका उनलाई तत्कालै उपचारका लागि ल्याईएको थियो । तर उपचारका लागि ल्याउन साथै उनको मृत्यु भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रमुख नवराज कार्कीले जानकारी दिए ।